ဖြတ်သန်းခဲ့သော ကျောင်းသူဘ၀ ( ပ ) | Layma's World
Posted on July 21, 2007 by layma
Filed under: Link to the past |
« သိခဲ့ရဲ့လား…. ဖြတ်သန်းခဲ့သော ကျောင်းသူဘ၀ ( ဒု ) »
Jerry, on July 21, 2007 at 4:47 pm said:
ဇာတ်လမ်းက စမယ်မှ မကြံသေးဘူး … scene3မှာပဲ တစ်ခန်းရပ် ရှုတင်သိမ်းသွားတယ် … ဟင်း …ဟင်း …
ထမင်းစားပြီးသွားတော့လည်း ဒီလိုပဲ … ဂျူရီ မှာ ဘာဖြစ်မလဲလို့ သိချင်သွားတယ် … ကိုရီးယားကားတွေလိုပါပဲလား …
ဒါနဲ့ ဒေါ်ခင်စန်းတစ်ယောက်ရော နေလို့မှ ကောင်းရဲ့လား ? … ခုဆိုရင်တော့ ၅၀ ဖိုးဘယ်ရတော့မလဲနော် …
ဩော် … ကြာခဲ့ပြီလို့ ပြောရလောက်အောင် ကြာသေးတာ မဟုတ်ပါဘူး … သို့သော် ………………. လူတွေက နေပေမဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်းက မနေဘူးနော် …
အင် … ဘယ်တွေ ရောက်ကုန်ပါလိမ့် !! sorry … 😀
Drawing Board နံဘေးက အိပ်ရေးပျက်ည တွေကို မြင်ယောင် ကိုယ်ချင်းစာရင်း ……. နောက် လာမဲ့ scene များကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်ဗျား …
Jerry, on July 21, 2007 at 5:02 pm said:
ရေးဖို့ ကျန်သွားလို့ဗျ …
ထမင်း ၅၀ ဖိုး ဆိုတာထည့်ပေးထားဦး … နှောင်းလူတွေ မသိမှာစိုးလို့ … ခုခေတ်ချာတိတ်တွေလည်း သိချင်မှ သိတော့မှာ …
ထမင်း ၅၀ ဖိုး = လွန်ခဲ့သော ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ခန့် ၊ ဘယ်မင်းကြီး အုပ်ဆိုး …အင် ..ဘွာတေး … အုပ်စိုး စဉ်အခါက ၊ သုံးစွဲခဲ့ဖူးသော ကျပ်ငါးဆယ်တန် ငွေစက္ကူကို အခကြေးငွေပေးခြင်းဖြင့်
လူနှစ်ဦးခန့် ၀လင်စွာ စားနိုင်သောထမင်း …. စသည်ဖြင့်ပေါ့ ဗျာ …
ပြန်မတိုင်ကြေးနော် … 😛
Anonymous, on July 22, 2007 at 5:32 am said:
ဂျစ်တူး - gyit_tu, on July 22, 2007 at 12:22 pm said:
Layma, on July 22, 2007 at 12:52 pm said: